OMG! दुःखीलाइ मात्रै किन यस्तो? बाबुबाट बलात्कृत छोरी क्यान्सर पीडित, बिचरा भन्ने सम्म भएनन् – PathivaraOnline
Home > समाज > OMG! दुःखीलाइ मात्रै किन यस्तो? बाबुबाट बलात्कृत छोरी क्यान्सर पीडित, बिचरा भन्ने सम्म भएनन्
admin January 30, 2019 January 30, 2019 समाज	0
ओखलढुंगा — जन्म दिने आमाले छाडेर गएपछि उनी आफ्नै बुबाबाट बलात्कृत भइन् । पहिलोपटक बुबाबाट बलात्कृत हुँदा संरक्षण गर्ने हजुरआमा बितिन् । त्यसपछि उनका पिताले पुन: बलात्कार गरे । दोस्रोपटकको बलात्कार सहन नसकेपछि भने उनले उजुरी गरिन् । प्रहरीमा उजुरी गरेसँगै राक्षसरूपी बुबा जेल चलान भए ।
अवस्था यतिसम्म दयनीय छ कि उनलाई कुर्ने कुरुवासम्म कोही छैन । २ भाइ सानै छन् । गाउँलेले ती भाइहरूको अवस्था देखेर, ‘बिचरा’ भन्ने गर्छन् तर उनलाई बिचरा भन्नेसम्म कोही रहेनन् ।
रोइरहिन्, चिच्याइरहिन् किशोरी ! तर पापीहरुले दुष्कर्म गर्दै बनाइरहे भिडियो ! [भिडियो सहित]
भाईले दिदीलाई भने, ‘तिम्रा छोरा–छोरी मेरो कब्जामा छन्, तुरुन्त ३ लाख रुपैयाँ नदिए जे पनि हुनसक्छ’